Ahlangene amaWesile | News24
Inkonzo yamaWesile ibibambe ingqungquthela yayo eGugulethu ngempelaveki.
NguMbo nomXesibe amarhamente aseWesile athe ahlangana eGugulethu kwimpelaveki edlulileyo kwingqungquthela yeli bandla yonyaka.
Lo mnyhadala, nobanjwa rhoqo ngonyaka, uchazwe njengo wama 41.
Ngamakhulu amarhamente aphuma kwizithili ezahlukeneyo kwiphondo leNtshona Koloni athe awuzimasa.
Unongxowa webandla lamaWesile uInathi Ntantiso uthe le ngqungquthela isingethwe phantsi kwesihloko esithi: “Thandazani ninga phezi”. Logama umxholo wayo ubusithi: “Sise amehlo kuyo imbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu” nochatshulwe kwincwadi yamaHebere isahluko se 12 ivesi yesibini.
Ukanti bekusegcibhala kumarhamente intsuku ezine ukusukela ngoLwesine ukuya kuthi ga ngeCawa, lonke eli xesha kutyiwa ivangeli. Noxa kunjalo akhange zisale ngaphandle izirhawana ngethuba kusiwa inkomo.
U-Ntantiso uvakalise uchulumanco ngulo msitho, nawuchaze njenge mpumelelo. Wongeze ngelithi olandelayo uzakubanjwa eKhayelitsha ngelixesha kunyaka ozayo, watsho ememelela izithili ukuba zilungise.